प्रेम सम्बन्धमा बस्नको लागि सहि उमेर कुन हो ? - प्रेरक प्रसंग - Sakaratmak Soch
कहिले काही त लाग्छ कि सबथोक छोडेर कतै टाढा जाउ, कोहि हामीलाई बुझ्ने नै छैनन्, कसैलाई फरक नै पर्दैन कि हामी खुसी छुम या दुखी, जसलाई जति धेरै माया दिन्छौ उसले त्यति नै धेरै पिडा दिने गर्दछ । जसलाई जति बढी महत्व दियो उसले उति नै बढी मन दुखाउने गर्दछ । लाख कोसिस गर्दा पनि कसैलाई खुसि बनाउन सकिदैन । आफ्नो सबैथोक दिएर पनि कसैको मन जित्न सकिदैन ।
प्रेमको लागी, खुसीको लागी सम्बन्ध जोड्छन् तर बदलामा झन् बढी पिडा मिल्ने गर्छ । धेरै प्रश्नहरु मान्छेले सोधेका छन्, र म तिन प्रश्नको जवाफ एकैचोटी दिन चाहन्छु । एक प्रश्न कसैले सोधेको छ, जब तपाइँ पढाइ गर्नु हुदैछ, जब तब परिपक्व हुनुन्न तब तपाइँ सम्बन्धलाई अघि बढाउन सक्नुहुन्न तर कोहि पढाइको समयमा हामीलाई सहयोग गर्छ । हामीलाई अगाडी बढ्नको लागी प्रेरित गर्छ ।
हामीलाई सपोट गर्छ भने पढाइको बेला सम्बन्धमा बस्नु गलत हो ? र दोस्रो प्रश्न कसैले सोधेको छ, सम्बन्धमा बस्नको लागि सहि उमेर कुन हो ? र तेस्रो प्रश्न कसैले सोधेको छ, आजकल सम्बन्ध किन यति कमजोर हुन्छ ? किन सम्बन्ध लामो समय सम्म टिकिरहन सक्दैन ? यी तिन प्रश्नको जवाफ म एकै वाक्यमा भन्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिलो कुरा मैले यो कहिले भनेको छुइन कि पढाइको बेला रिलेसनमा नबस्नु भनेर । र बस्नु पर्छ पनि भनेको छैन । मैले सधै यहि भन्ने गरेको छु कि कोहि व्यक्ति परिपक्व हुदैन उसले सम्बन्ध निभाउन पनि सक्दैन ।
जस्तो कि हामीलाई प्रश्न गरिएको छ कि कोहि हामीलाई अगाडी बढ्नको लागि मद्दत गर्छ, प्रेरित गर्छ, पढाइमा मद्दत गर्छ । यसको मतलब त्यो ब्यक्तो परिपक्व छ । यदि तपाई परिपक्व हुनुन्छ भने सम्बन्धले तपाइँको जीवनमा खुसि लिएर आउने छ । सबैथोक तपाइँमा नै निर्भर गर्दछ । र यो प्रश्न गरिएको छ, रिलेसनमा बस्न कुन उमेर सहि हुन्छ ? यो कुनै तपाइँको शारीरिक उमेर सग सम्बन्धित हुदैन । तपाईको शारीरिक उमेरले केहि फरक पर्दैन । तर तपाईको मानसिक उमेरले धेरै फरक पार्दछ । सारा खेल तपाइको परिपक्वतामा निर्भर गर्दछ ।
शारीरिक रुपमा त तपाइँ ठुलो बन्नुहुन्छ तर मन र भावनाको रुपमा तपाइँ धेरै सानो बन्नुन्छ । कमजोर बनुहुन्छ । त्यसैले यस्तो हालतमा तपाइँ रिलेसनमा बस्नुहुन्छ भने तपाइले खुसि भन्दा बढी पिडा बढी पाउनेहुनेछ । यदि कुनै सम्बन्धले तपाइको जीवनलाई राम्रो बनाउछ, तपाईलाई एक योग्य व्यक्ति बनाउछ, तपाईलाइ एक योग्य ब्यक्ति हुन प्रेरित गर्छ, तपाईको सपनालाई पुरा गर्न प्रेरित गर्छ, तपाइलाई बन्धनमा राख्दैन, तपईलाई पखेटा दिन्छ, तपाईलाई उड्नको लागी प्रेरित गर्छ, तपाईको सपनालाई पुरा गर्नको लागि तपाईलाई साथ् दिन्छ भने त्यो सम्बन्ध धेरै अनमोल हुन्छ । त्यो व्यक्ति धेरै अनमोल हुन्छ ।
सोचेर मात्र कदम उठाउनुहोला – प्रेरक प्रसंग